Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » FAA wepụtara ịdọ aka na ntị ọhụrụ Boeing 737 MAX
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
A na -enyo enyo na ụgbọelu ndị ihe metụtara emetụtaghị njikwa ikuku elektrọnik nke ngwugwu ntụ oyi nke na -esi n'ọdụ ụgbọ elu ndị ọzọ ebubata ikuku na ngwongwo.
A dọrọ ịdọ aka na ntị gbasara nsogbu iwepu ọkụ na Boeing 737 MAX.
Ntuziaka nchekwa metụtara ụgbọ elu Boeing 737 MAX na ụfọdụ ụdị 737 ndị ọzọ.
Iwu a metụtara ụfọdụ ụgbọ elu 2,204 n'ụwa niile.
Nsogbu ndị ahụ adịghị ka ọ ga -akwụsị maka Boeing 737 MAX nwere nsogbu. Mgbe US Nchịkwa Federal Aviation (FAA) tụgharịrị usoro izizi ya na -agbada ihe niile Boeing Ụgbọ elu 737 MAX na Nọvemba, ihe karịrị otu narị ụgbọ elu ndị yiri ka a na -akọcha dara na Eprel maka nsogbu gbasara sistemụ eletriki. Ihe nlereanya Boeing kachasị ọhụrụ, 100 MAX 737, biliri na nke mbụ n'ọnwa June ma na -atụ anya na ọ ga -amalite ọrụ na 10.
Mana n'usoro ọhụrụ, nke ewepụtara taa, FAA machibidoro ikike ụgbọ elu Boeing 737 Max & NG ike ibuga ọkụ na -ere ọkụ, na -achọpụta na ụgbọ elu nwere ike inwe nsogbu na njikwa ikuku na -abanye na nke na -ebufe.
Ụkpụrụ nchekwa na -emetụta ụgbọ elu Boeing 737 Max na ụfọdụ ụdị 737 ndị ọzọ, nke chọrọ ndị na -arụ ọrụ ka ha nyochaa na ihe niile dị na ngwongwo ahụ anaghị enwu ọkụ na anaghị ere ọkụ. A na -enyo enyo na ụgbọ elu ndị emetụtara nwere "njikwa elektrọniks kụrụ afọ n'ala nke ngwongwo ntụ oyi nke na -esi n'ọdụ ụgbọ elu ndị ọzọ ebubata ikuku na ngwongwo," ka FAA kwuru.
Iwu a metụtara ụfọdụ ụgbọ elu 2,204 n'ụwa niile, 663 n'ime ha ka edebara aha na US. Ihe nlereanya Boeing 737 Max ka etinyere nke ọma kemgbe Machị 2019 mgbe ihe mberede abụọ na -egbu egbu nke gburu mmadụ 346 nọ n'ụgbọ ahụ kpughere nsogbu dị na sistemụ kọmputa nọ n'ụgbọ. Nnyocha ọzọ emeela ka enwekwuo nsogbu nchekwa, ọ bụghị naanị n'ụdị 737.
Enyochala Boeing 777 na 787 maka ntụpọ nchekwa. Companylọ ọrụ ahụ n'onwe ya gbara ndị na -ebu ụgbọ elu ume ka ha kwụsịtụ ụgbọ elu nke ihe dị ka ụdị 777 n'ọnwa Febụwarị mgbe ọtụtụ injin gbawara n'etiti, ebe n'otu ọnwa ahụ, FAA rịọrọ ka enyocha 222 Boeing 787s maka nchegbu gbasara ogwe mbibi. Nchepụta n'ichepụta ihe gbasara "irighiri ihe ndị mba ọzọ" fọdụrụ n'ụgbọ elu ọhụrụ emeela ka a nyochakwuo mega-liner.
Hawaii na -akọ akụkọ mbibi ọhụrụ nke mgbawa ugwu
Onye ọka ikpe Scotland chụpụrụ ihe ịma aka ụlọ oriri abalị ...
A na -emechi ụlọ ọrụ njem nlegharị anya Bahamas dị na Paris n'ihi…
Etu esi ewulite njem nlegharị anya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị? Mission ...
Ntuziaka ngwa ngwa gị maka ịhazi ụzọ mgbapụ na Georgia ...
eTurboNews guzo n'azụ Freedom of Press na Pen ...
UNWTO kwagara Saudi Arabia na njide: onye odeakwụkwọ ukwu…
Ndị ụgbọ elu Amerịka na -ezukọ na -achọ ụgbọ elu ...
2021 Top 10 Global Foodie Hotspots Revealt
Akuko Norton: Nkwado nkwado teknụzụ bụ nke 1 ...
Ụgbọ elu mba ofesi India: nkwụsịtụ gbatịrị ...
EU: Iwu nbata Hong Kong ọhụrụ na -eyi egwu ...
Aha ngalaba maka ire ere
Mwepegharị ọzọ nke oke ala US maka ịgba ọgwụ mgbochi ọ bụla ...
Nnukwu E-Commerce nke China iji guzobe ụgbọ elu ọhụrụ
Allegiant na -ekwuputa ụgbọ elu Key West ọhụrụ na -akwụsịghị akwụsị